हामी तपाईंलाई सर्कलियास अनलाइनमा चुनौती दिन्छौं एक परिपूर्ण वृत्त क्रिएटिव अनलाइन
रेखाचित्र सिक्नु भनेको घण्टा र रेखाचित्र सहि घण्टाको सहि हो र हाम्रो टेकनीक सुधार गर्दै। क्रेटिभोस अनलाईनमा हामी तपाईंलाई चुनौती दिन चाहन्छौं कि तपाई हात मा भएको कुनै पनि उपकरणको साथ उत्तम फ्रीहन्ड सर्कल कोर्न को लागी सक्षम हुनुहुन्छ कि भनेर।
हामी यो भन्छौं किनकि यो भन्दा सजिलो हुनेछ ग्यालक्सी नोट १० वा त्यो आईप्याडको एस पेन प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंसँग कुनै उपकरणको साथ। हामी वेब अनुप्रयोगबाट चुनौती दिन्छौं जुन तपाईंलाई त्यो उपकरणको साथ फ्रीह्यान्ड कोर्न अनुमति दिनेछ। र हामी के चाहन्छौं तपाईका टिप्पणीहरू यहाँ तपाइँको ट्विटर खातामा लिंक गर्न को लागी प्रयोग गर्नका लागि जहाँ तपाइँ छविलाई प्राप्त गर्नुभयो चुनौतीको साथ अपलोड गर्न।
हामी राम्रो, र संग हुनेछौं तपाईं 90% पारित उत्तम भन्दा अधिक हुनेछ रेखाचित्र मा आफ्नो कौशल देखाउन (मेरो मामला मा मा माउस संग यो गरेको छु)। इलस्ट्रेसन वर्गमा हामीलाई सधैं सर्कलहरू कोर्न प्रोत्साहित गरियो। अभ्यासले उत्तम बनाउँदछ र यदि तपाईंले सयौं सर्कलहरू कोर्नुभयो भने यो अझ गाह्रो हुन्छ।
सधैं महत्त्वपूर्ण छ एकको नाडी बारे सावधान रहनुहोस् र धैर्य लिनुहोस् त्यो लाइन फेला पार्न जुन हामीलाई राम्रो मोटाईको मोहर र मोड्न सक्ने क्षमताको ठूलो रेखामा पुर्‍याउन सक्षम छन्। यदि हामीले देख्यौं कि यो उत्तम सर्कल कोर्न को लागी गाह्रो छ, हामी सधैं आफ्नो स्ट्रोक ठाडो र तेर्सो सीधा रेखाचित्र कोर्नाले सुधार गर्न सक्दछौं।
र आउनुहोस्, तपाईं यसलाई तल झर्नुहोस् रेखाचित्र मा सुधार गर्न को लागी। स्पष्टतया यो राम्रो नब्ज हुनु जहिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर अभ्यास र चाहनाले तपाईले राम्रो नब्ज हुने मानिसमा जान सक्नुहुनेछ, तर, मानौं कि तिनीहरू थोरै अल्छि छन्।
त्यसोभए तपाईंलाई थाहा छ, तपाईं यस वेबसाइट को माध्यम बाट जानुहोस्, तपाइँ तपाइँको ट्विटर खाता को माध्यम बाट उपलब्धि साझा गर्नुहोस् र त्यसोभए तपाइँले हामीलाई यहाँ टिप्पणीहरूमा उल्लेख गर्नु भएको छ तपाइँको सही सर्कलमा साक्षी दिनको लागि। पुरस्कार? रमाईलोको लागि मात्र हामी यहाँ छौं र तपाईंलाई वेबसाइटहरू देखाउँदछौं जुन तपाईंको साथीहरू वा स्कूलका साथीहरूलाई चुनौती दिन्छन्। यी तरिकाहरू छुटाउनुहोस् हात तान्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » हामी तपाईंलाई Creativos अनलाइनमा चुनौती दिन्छौं: के तपाईं आफ्नो ट्याब्लेट, मोबाइल वा आईप्याडको साथ एक उत्तम सर्कल फ्रिह्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ?
एडोबले प्रयोगकर्ताहरूलाई अझै म्याकोस क्याटालिना अपग्रेड गर्न सल्लाह दिन्छ